Olee otú Wụnye na-arụ ọrụ ndị Ikuku nkwụnye na Windows | | OS-ụlọ ahịa Blog
June 17, 2019 ecommerce 3G & ikuku kaadị, Electronics, netwọk, OS-ụlọ ahịa, OSGEAR Support, ngwaahịa, Technology 0
Echere m na ị zutere ụfọdụ ajụjụ na-eme ka netwọk nkwụnye ọkwọ ụgbọala na-akwụsị na-arụ ọrụ. Soro nzọụkwụ ndị a nwere ike idozi wireless nkwụnye ngwaọrụ efu ma ọ bụ ihe mgbe ochie mbipụta. Jide n'aka na ị rụnyere na Ikuku nkwụnye n'ụzọ ziri ezi.
nhọrọ 1 - akpaghị aka (na-atụ aro) -Windows 7, Vista na XP nwere ike inye mmelite na ọkwọ ụgbọala na ugbu a na-arụnyere ma ọ bụ ọhụrụ ihe nkwụnye eji Windows Update. Ka anya dị ka ngwaọrụ na-plugged na ma ọ bụ na nso nso arụnyere, Windows ga-agbali iji jikọọ na Ịntanetị na ibudata na ọkwọ ụgbọala na-akpaghị aka.
Nhọrọ 2- Iji aka - Ị ga-mkpa ụfọdụ kọmputa nkà na ndidi iji wụnye gị WiFi nkwụnye ọkwọ otú a n'ihi na ị chọrọ ịhụ kpọmkwem nri ọkwọ ụgbọala online, ibudata ya na wụnye ya kwụpụ site nzọụkwụ.
Wụnye na-akwọ akpaghị aka>>>
Mgbe inserting gị nkwụnye gị na kọmputa, download ziri ezi ọkwọ ụgbọala maka nkwụnye na ị chọrọ iji wụnye.
Wụnye ọkwọ ụgbọala mgbe a mmapụta na-egosi
nzọụkwụ 1: Ozugbo netwọk nkwụnye na-plugged na, a Hụrụ New Hardware window ga-gbapụta na-elu-. Pịa na Ịchọta na wụnye ọkwọ ụgbọala software (na-atụ aro)
nzọụkwụ 2: The ọzọ ntụziaka ị ga-ahụ bụ itinye na diski na bịara na gị ikuku na netwọk nkwụnye. Pịa na m na-adịghị na diski. Gosi m ọzọ nhọrọ.
nzọụkwụ 3: Pịa Chọgharịa m na kọmputa maka ọkwọ ụgbọala software (elu).
nzọụkwụ 4: Pịa-agagharị… button. Chọpụta nchekwa gị ọkwọ. Na nke a atụ, VISTAX86 họrọ maka Linksys WUSB54G.
nzọụkwụ 5: Pịa Next. Chere maka kọmputa iji wụnye ọkwọ ụgbọala software.
Driver nwụnye site na Ngwaọrụ Manager maka Windows >>>
nzọụkwụ 1: Na Malite menu, nri-pịa Computer na họrọ Jikwaa.
nzọụkwụ 2: Na ekpe, họrọ Device Manager na-ewetara ya na nri.
Note: Ọ bụrụ na ndị Driver software adịghị arụnyere n'ụzọ ziri ezi, ndị na-ezughị ezu arụnyere nkwụnye ga-abịa na ndị ọzọ ngwaọrụ otu. Dị nnọọ ka e gosiri na aga image.
nzọụkwụ 3: Right pịa na-amaghị nkwụnye na Melite Driver Software.
nzọụkwụ 4: Pịa Chọọ na-akpaghị aka maka emelitere ọkwọ software.
Note: Ọ bụrụ na Windows na-enweghị ike wụnye gị nkwụnye, Windows ghara-ga na-wụnye na-akpaghị aka.
nzọụkwụ 5: Jide n'aka na ezi ntọala na-ahọrọ site rutere ha na followings ụzọ gasị:
Windows 7 / Vista: Pịa Malite > Right click Computer > Properties > Advanced usoro ntọala > Hardware tab > Device Nwụnye Settings
Windows XP: Pịa Malite > Right pịa My Computer > Properties > Hardware tab > Windows Update
nzọụkwụ 6: Pịa na Save Settings ma ọ bụ OK itinye mgbanwe.
Nkwenye nke a nke ọma Driver echichi na-enweta mgbe ihe nlereanya nke gị nkwụnye bụ labelụ na depụtara na Network ihe nkwụnye otu nke Device Manager.
More banyere Tech-Ozi, Pịa ebe a
Ekwentị mkpanaka OS-ụlọ ahịa ngwaọrụ Model processor CPU software Intel Nokia Series Driver Support Technology_Internet HTC ọkwọ ụgbọala nkwado ihe Njikwa Ngwaọrụ Technology Public Nzube Samsung 64-bit Windows processors iwu nkọwa HD Graphics
Sony Ericsson processors Qualcomm Nokia ọkwọ ụgbọala nkwado software Technology HTC smartphones processor Intel Server ngwaọrụ Model Samsung CPU Public Nzube HD Graphics iwu nkọwa Technology_Internet ihe Njikwa Ngwaọrụ Samsung Galaxy Intel 64-bit Windows OS-ụlọ ahịa Series Driver Support Ekwentị mkpanaka